Araara Harreefi Waraabessaa!! – Kichuu
HomePhoto GalleryAraara Harreefi Waraabessaa!!
Araara Harreefi Waraabessaa!!
Araara Harreefi Waraabessaa
Gaaf tokko harreefi waraabessi hanga yoomiitti akka diinaatti wal ilaalla? Ammaan booda lola gidduu keenya jiru dhiisnee walitti yaa araaramnu jedhanii waliigalan. Araarichis maatiiwwan harreefi waraabessaa bakka argamanitti akka ta’u murteessuun beellama qabatan.
Guyyaa beellamaa sana waangoon jaarsa taatee harreefi waraabessaan diinummaafi lola isin gidduu jiru dhiisaatii walitti araaramaatii fira ta’aa, akka maatiittis waliin jiraadhaa jetteen. Yeroo kana harroonniifi waraabeyyiin yaada waangootti waliigaluufi gammaduu isaanii harka walitti rukutanii ibsan.
Waraabeyyiin garuu sa’aatiin araaraa utuu hinga’in dura waangoo waliin walitti hasaasaafi harroota irratti shira xaxaa turaniiru. Dhuma irratti jaarsi waraabessaa tokko ka’ee araarri keenya garaa guutuudhaan ta’uu isaa agarsiisuuf walhaadhungannu yaada jedhu dhiyeesse. Shira waangoofi waraabessi irratti xaxaa turan kan hubate harree keessaa tokko ka’ee araaramneerra; waldhungachuun haa hafu jedhee taa’e jedhama.
Goonni kun JAAL HUSEEN ABDURAMAAN jedhama. Nama Jaal Nadhii Gammadaa waaliin turedha. Mana hidhaatti qalbiin isaa darbe. Ni maraachaniin. Achii baasanii magaalaa Jimmaatti gatani goota Oromoo kana. Goonni Oromoo kun yeroo ammaa Harargee aanaa Dirree Dhayaritti argama. Sabboontonni Oromoo gargaaraanii akka jiran naaf eeranii jiru. Meeqatu saba ofiif jecha qalbii dhabe. Goota kanaan fayyi jedhaa.
Jala Bultii!!! Guyyaa WBO!!! Guyyaa eenyummaa Gootota Oromoo.